ဝါးခယ်မ : မြို.လေးနှင်. မုန်.ဟင်းခါး ယဉ်ကျေးမှု ( ၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါး )
မြို.လေးနှင်. မုန်.ဟင်းခါး ယဉ်ကျေးမှု ( ၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါး )
မြန်မာ.ရိုးရာ စားစရာများအနက် တစ်နိုင်ငံလုံး လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး မသိမရှိ မစားဖူးသူမရှိ ပြိုင်ဘက်ကင်း သရဖူဆောင်းနိုင်သော စားစရာ တစ်မျိုးကား မုန်.ဟင်းခါးဟုပင်ပြောရမည်ဖြစ်သည် ။
သူ.ကို တုဖက်ယှဉ်ပြိုင်နှိုင်လောက်စရာ ဟူ၍ လဘက်သုပ် တစ်မျိုးလောက်သာ ရှိသော်လည်း သဘောသဘာဝ အခြေအနေချင်းက မတူပဲ နံနက်ခင်း စားစရာအဖြစ်တစ်မျိုး ၊ နေ.လည်ခင်း ထမင်းနှင်.ရောစား၍ ရသော ဟင်းအဖြစ် တစ်သွယ် ၊ ညနေခင်း အာသာပြေ စားစရာအဖြစ် တစ်နည်း ဘက်စုံအသုံးဝင်မှုကြောင်. ယခုတိုင် စင်ပေါ်က အောင်ပွဲခံဆဲ......
မုန်.ဖတ်နှင်. ဟင်းခါး တွဲစားရသဖြင်. မုန်.ဟင်းခါးဟုခေါ်သလား ? အချို.ဒေသများကခေါ်သလို ငါးနှင်.ချက်သော ဟင်းရည်နှင်. တွဲစားရသဖြင်. မုန်.ဟင်းငါး ဟုခေါ်သလားကတော. ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များသာ သိပေလိမ်.မည် ။ သေချာသည်ကတော. မြို.လေးတွင် မြို.ပေါ် ၁၀ ရပ်ကွက် ၊တစ်ဖက်ကမ်း ၄ ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာ ၁၂၆ ရွာ ရှိသည်.အနက် မုန်.ဟင်းခါးသည် ၊ မုန်.ဟင်းခါးဆိုင် မရှိသော ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာတို. တော. ရှိအံ.မထင်ပါ ။ ရပ်ကွက်အတွင်း အိမ်နီးနားချင်းများကိုသာ အားပြုရောင်းသောဆိုင် ၊ ရှေးအစဉ်အဆက် နာမည်တစ်ခု အားပြုရောင်းနေကြသောဆိုင် ၊ လဘက်ရည်နှင်.တွဲ၍ နံနက်ခင်းစာရောင်းသောဆိုင် ၊ရွာများသို. လှေဖြင်.လှည်.လည်ရောင်းချသော Mobile Shop စသည်ဖြင်. ရပ်တည်ပုံအမျိုးမျိုးတော. ကွာချင်ကွာပေလိမ်.မည် ။
၀ါးခယ်မ ဈေးကြီးအတွင်း မုန်.ဟင်းခါးဆိုင်တန်း
မုန်.ဟင်းခါးနှင်. ပတ်သက်လျှင် ပင်လယ်ပိုင်းဒေသများ ၊မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများက ပို၍နာမည်ကြီးသလိုတော.ရှိသည် ။ထို.ကြောင်.လည်း မြိတ် (ဘိတ်) မုန်.ဟင်းခါး ၊မော်လမြိုင်မုန်.ဟင်းခါး၊ ရခိုင်မုန်.ဟင်းခါး (မုန်.တီ) ၊ဟင်္သာတ မုန်.ဟင်းခါး ၊လပွတ္တာ မုန်.ဟင်းခါး ၊မော်ကျွန်းမုန်.ဟင်းခါး ၊မြောင်းမြ မုန်.ဟင်းခါး ၊၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါး စသည်ဖြင်. နာမည်ကျော်ကြခြင်း ဖြစ်ပေလိမ်.မည် ။တစ်ခုပဲရှိသည် ။ ဟင်းရည်ချက်ရာတွင် အဓိကထားသုံးသော အမည် ၊ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင် စသည်တို.ကို လိုက်ပြီး အနံ. ၊အရသာ ၊ပုံစံတို.ကတော. တူမယောင်ယောင်နှင်. ကွဲထွက်သွားကြသည် ။
စာတိုက်ထောင်. မုန်.ဟင်းခါး (ဓါတ်ပုံ- NayLynn Kyaw)
၀ါးခယ်မုန်.ဟင်းခါး အနေနှင်.တော. ပြင်ဆင်ပုံ ၊ရောင်းချပုံ မှအစ အနံ. ၊အရသာ အထိ သီးခြား ပင်ကိုယ်ဟန်ရှိသည်ဟုတော.ပြောရမည်ဖြစ်သည် ။ဟိုးယခင်ကာလများဆီမှ ယခုအချိန်တိုင် အစဉ်အလာမပျက် ရောင်းချနေသော ချိန်ခွင်နှင်.မုန်.ဟင်းခါးဆိုင် လေးများက ပင်လျှင် တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ ဖြစ်နေသလို သာမာန်ရောင်းချနေသော ဆိုင်လေးများလည်း ရှိနေပါသည်။ မုန်.ဟင်းခါးတစ်ပွဲဟု မှာလိုက်လျှင် ဘယ်လောက်သားထည်.လိုက်ရမလဆြိုသော စကားက ကြားဖူးနေကျမဟုတ်တော. နားထဲ တစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမည် ဖြစ်သော်လည်း နောင်တော. ထိုအရာကပင်လျှင် နှစ်လိုဖွယ် တစ်မျိုး ဟုခံစားကြရ ပေမည်။
ရေကျော်ကမ်းနားလမ်း တောသင်္ဘောဆိပ်၇ှိ မုန်.ဆိုင်တန်း
မြို.လေးတွင် မုန်.ဟင်းခါးကို အတော်များများက မနက်ပိုင်းနှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးလေ.ရှိပြီး မြို.လေးကို အလည်ပြန်ရောက်ကြရသူတို.အဖို.မူ ငယ်ငယ်ကစားခဲ့ဖူးသော နေရာ ၊ဆိုင် တို.ကိုလိုက်ရှာ အ၀ထိုင်စားရင်း ငယ်ဘ၀ဆီ လည်ပြန်ခံစားကြသည် ။ ထိုအချိန်တွင်တော. ထိုမုန်.ဟင်းခါးသည် မုန်.သက်သက်မဟုတ်တော.ပဲ အတိတ်၏ သုခဘုံသို.သွားရာပေါင်းကူးတံတားသဖွယ်..........
မြို.လေးဆီက မုန်.ဟင်းခါးကို အဘယ်မျှ စွဲလမ်းကြသနည်းဆိုလျှင် ၀ါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါးကို ရန်ကုန်သို. တကူးတကမှာစားကြသည် ။ တကူးတက သယ်ယူကြသည် ။ ကိုယ်.ဘာသာချက်စား၍ ရသော်လည်း မြို.ဖြစ် စစ်စစ်ကို ပိုနှစ်လိုကြသဖြင်. မုန်.ဟင်းရည်ကို ရေသန်.ဗူးနှင်.ထည်. ၊မုန်။ဖတ်၊အကြော်၊နံနံပင်မှအစ ငြုပ်သီးမှုန်.အဆုံး ရန်ကုန်အထိချိုင်.နှင်.ထည်.သယ်ပြီး စားကြသည် ။ မြို.လေးဆီမှ ၀ယ်ခွင်.မကြုံသူတို.က ရန်ကုန်တွင် ၀ါးခယ်မုန်.ဟင်းခါး ဘယ်နေရာရောင်းသည်ကိုနားစွင်.နေကြသည် ။ကြားသည်နှင်.မိသားစုလိုက်သွားရောက်စားသုံးကြသလို တကယ်.အရသာမှန်ပါက အချင်းချင်း လက်တို.ကြသည်။ သို.သော်လည်း ရန်ကုန်တွင်ဝါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါးစစ်စစ်က အတော်ပင်ရှားပါးလှသည်။ထိုအခါကိုယ်.ဘာသာချက်စားကြသည် ။ထိုသို.ချက်စားတိုင်း မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအားလုံးကိုအမှတ်ရရခေါ်ကျွေးကြသည် ။ အဖိတ်ခံရသူတို.ကလည်း ၀ါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါး အသံကြားသည်နှင်. မည်မျှဝေးဝေး အားရ၀မ်းသာသွားကြသည် ။ ၇န်ကုန်တွင်ပြုလုပ်သော ၀ါးခယ်မနှင်.ဆိုင်သည်. အခမ်းအနားများတွင် မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းများနှင်.တွေ.ရင်း (အထူးသဖြင်. သက်ကြီးပိုင်းတို.က )၀ါးခယ် မုန်.ဟင်းခါးကို လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးစားကြသည်။၀ါးခယ်မသား ၀ါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါး မကြိုက်သူဆို၍ မကြားခဲ့ဖူး ၊မတွေ.ခဲ့ဖူး ။(သို.သော် ကျောင်းကြီး ဒဿမတန်းတွင် မြန်မာစာသင်ကြားသော ဆေးရုံရပ်ကွက် မြို.မလမ်းရှိဆရာမဒေါ်မြင်.မြင်.ကြည်ကတော. သူလုံးဝမစားပါ ၊မကြိုက်ပါတဲ့ ၊မုန်.ဟင်းခါးဖတ်အမျှင်များကို ရွံလို.ပါဆို၍ ငယ်စဉ်က ရီမောခဲ့ကြရသည်)
ထမင်း ငြုပ်သီး တို.ဖြင်.ရောနယ်ထားသော မုန်.ပွဲ
မြို.လေးတွင်တော. ထိုမုန်.ဟင်းခါးသည် သာမာန်လူတန်းစားတို.အဖို. မုန်.တစ်မျိုးသာဖြစ်သော်လည်း အခြေခံ လူတန်းစားတို.အဖို. အဖိုးနည်း ၀န်ပါ ဟင်းတစ်ခွက်လည်းဖြစ်သည်။ နေ.လည် (သို.)ညနေ ဟင်းမရှိလို.ပြဿနာမရှိ ။မုန်.ဟင်းခါးတစ်ပွဲဝယ် ဇလုံထဲထည်. ၊ငြုပ်သီးမှုန်.ရဲနေအောင်ဖြူး ၊ငံပြာရည်လေးဆမ်း ၊ရှောက်သီးလေးညှစ် ၊နံနံပင်ပေါချိန်ဆို နိုင်းချင်းထည်. ဟင်းရည်အကုန်လောင်းချ အားရပါးရနယ်ပြီးစားလိုက်ရပါက တော်ရုံဟင်းလောက်တော. ဟင်.အင်းလုပ်လို.ရသည်။တစ်ခုရှိသည်က မြို.လေး၏ နာရေးအားလုံးလိုလိုတွင် မုန်.ဟင်းခါးသည် ဒိုင်ခံဒါနပြုဖွယ် အရာဖြစ်ပြီး သာရေးကိစ္စရပ်များတွင်လည်း အတော်အသုံးဝင်သည်ဖြစ်သော်လည်း မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားများတွင်တော. ကျွှေးလေ.ကျွေးထ သိပ်မရှိခြင်းပင် ။
၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါးသည် မုန်.ဟင်းခါးဖတ်အလုံးက နန်းကြီးလုံး တစ်ဝက်နီးပါးခန်.တော.ရှိသည် ။ထို.ကြောင်.လည်း နန်းသေားသော မုန်.ဖတ်အမျှင်များဖြင်.စားရလျှင် အရသာကထိထိမိမိမရှိလှ ။ထို.အတူညှပ်ခေါက်ဆွဲ ဖတ် ကလည်း ထု ထူပြီး မုန်.ဖတ်ဆိုင်များရောက်မှ ကပ်ကြေဖြင်.ညှပ်ရောင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တွင် မုန်.ဖတ်ဟုခေါ်သော်လည်း မြို.လေးတွင်တော. မုန်.ဟင်းခါးဖတ် ဟုခေါ်ပြီး ညှပ်ကိုတော. မြို.လေးတွင် ညှပ်ခေါက်ဆွဲဟု သုံးသည် ။ ထို.အပြင် ရန်ကုန်တွင်ခေါက်ဆွဲဟုခေါ်သော အရာကို မြို.လေးတွင်တော. ဂျုံခေါက်ဆွဲဟုသာ ခေါ်ကြသည်။ ထို.အပြင် ရန်ကုန်တွင် ပဲကြော်ဟုခေါ်သောအကြော်ကို မြို.လေးက ပဲကပ်ကြော်ဟုသုံးသည်။ မြို.လေး၏ မုန်.ဟင်းခါးဆိုင်များတွင် ပဲကပ်ကြော် ၊ပဲပျော.ကြော် (ဂျင်းပဲကြော် ၊မန္တလေးပဲကြော်) ၊ဘူးသီးကြော် ကြက်သွန်ကြော်စသည်များ ၊ ငါးဖယ်ကြော် ၊ ပုဇွန်ကြော် (ပုဇွန်ကြော်ဆိုရာတွင် ပုဇွန်နှင်.မုန်.နှစ်ရောကြော်သော အကြော်မဟုတ်ပဲ ပုဇွန်အသားကိုထောင်၍ကြော်ထားသော အကြော်)၊ရာသီချိန်တွင်သာရတတ်သောပုဇွန်ဦးနှောက်ကြော်(ထိုအကြောင်းကတော. အကယ်တ၀င်.ရှင်းပြမှအဆင်ပြေမည်ဖြစ်သဖြင်. နောင်မှသီးခြားရှင်းလင်းပါမည်) စသည်တို. ရောင်းချလေ.ရှိကြပြီး အိုးဘဲဥ ကိုတော. သိပ်စားလေ.မရှိကြပဲ ဘဲဥပြုတ်ကိုသာ များသောအားဖြင်. အသုံးပြုကြသည် ။ထို.အပြင် မုန်.ဟင်းခါးဆိုင်အကြော်ဗန်း များထဲမှ ပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သော အရာတစ်မျိုးလည်းရှိပါသည် ။ထိုအရာကား ငါးသလောက်ဥ ။ ယခင်က လက်သုံးလုံးခန်.ရှိ ငါးသလောက်ဥကြီးများကိုကြော်ပြီး အတုံးများတုံးကာ မုန်.ဟင်းခါးနှင်.ထည်.စားလေ.ရှိသော်လည်း ယနေ.အချိန်တွင်တော. ရှားပါးသောကာလတွင် လက်နှစ်လုံးမရှိတစ်ရှိ ငါးသလောက်ဥအသေးလေးဈေးက ၁၈၀၀၀ နှင်. ၂၅၀၀၀ ကြား ဆိုတော. သူတို.ရောက်မလာနိုင်တော.။မွန်ပြည်နယ်အချို.ဒေသများတွင် ရှမ်းနံနံ ၊ ၇န်ကုန်တွင် ပဲသီး ၊ဧရာဝတီတိုင်းအချို.ဒေသများတွင် ပန်းဂေါ်ဖီ စသည်တို. မုန်.ဟင်းခါးတွင် ထည်.စားလေ.ရှိသော်လည်း မြို.လေးတွင်တော. နံနံပင် ၊ညှပ်ခေါက်ဆွဲဆိုလျှင် ကြက်သွန်စိမ်း ကလွဲ၍ အခြားထည်.စားလေ.မရှိကြ ။
အချို.က ဂျုံကို မုန်.ဟင်းရည်နှင်.စားလေ.ရှိသည်
မြို.လေးရှိ မုန်.ဟင်းခါးဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို သင်ဝင်ထိုင်လိုက်မည်ဆိုပါက မုန်.ဟင်းခါးလား ၊ညှပ်ခေါက်ဆွဲလား ၊ဂျုံလားဟုမေးလိမ်.မည် ၊ပြီးလျှင် ဘာကြော်ထည်.မလဲ ၊ ငြုပ်သီးစားလား ၊နံနံပင်ထည်.မလား ထပ်မေးမည် ၊ညှပ်ခေါက်ဆွဲမှာလျှင်တော. ကြက်သွန်စိမ်းလှီးထားသည်ကိုထည်.ပေးမည် ၊မုန်.ဖတ်ပေါ် ပဲမှုန်.အနည်းငယ်ထည်.ပေးမည် ၊ဆနွင်းစစ်စစ်ကြောင်. အ၀ါရောင်တောက်ကာ ကြက်သွန်ကြော်နံ.မွှေးနေသော ဆီချက် ဆမ်းပေးမည် ၊ ငြုပ်သီး ၊နံနံပင်ထည်.ပေးမည် ၊ကိုယ်.မြို.ကဟုထင်လျှင် ဟင်းရည် ခပ်စီးစီးလေး ဆမ်းပေးမည် ၊အခြားမြို.ကဟုယူဆလျှင် ဟင်းရည်ရွှဲရွှဲ ဆမ်းမလားမေးပြီးဆမ်းပေးမည် ၊ဟင်းရည် ဘယ်လိုပဲထည်.ထည်. သင်.အတွက် လဘက်ရည် အကြမ်းပုဂံလုံးခန်.ရှိဟင်းရည် တစ်ခွက်အပို၇မည် ။ ထို.အပြင် သင် ဟင်းရည်ထပ်တောင်းလို.ရသေးသည် ၊အကြိမ်ကြိမ်တောင်းလျှင် ဘာမျှပြောမည်မဟုတ်သော်လည်း တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ်တော. နည်းသွားမည် ။သို.သော် သင်နောက်ဆုံးစားသောက်ပြီးသွားလျှင်တော. တရားဝင်ဟင်းရည်နည်းနည်း ထပ်တောင်းသောက်ခွင်.ရှိသည်ထို.အတွက် မျက်နှာပူစရာမလို ၊၇န်ကုန်မှာလိုဟင်းရည်အတွက်ပိုက်ဆံပေးစရာမလို ။အချို.ကတော.အကြော်နှင်. ဟင်းရည်ထည်.သောက်လေ.ရှိသည် ။မြို.လေးရှိ မုန်.ဟင်းရည်က ငြုပ်ကောင်းမပါမဖြစ်သုံးကြပြီး အချို.ဆိုင်များက ပိုကဲထားသဖြင်. ရာသီဥတုအေးချိန် ၊ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ချိန်တွင်တော. ကွက်တိ ။
တစ်ခုရှိသည်ကမြို.လေးတွင် မုန်.ဖတ်သုပ် ၊ညှပ်သုတ်စသည်တို.ကသိပ်စားလေ.မရှိကြ ၊၀ါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါး ကိုယ်က ဟင်းရည်ပျစ်ပျစ်လေးနှင်.စားရသည်.ပုံစံ ၊ဂျုံသုပ် ကြာဇံသုပ်တို.လောက်သာစားလေ.ရှိသည် ၊အသုပ်နှင်.ပတ်သက်လျှင်တော. ဟိုးးးအရင်က ဈေးဂုံးတံတား အဆင်း (ယခုဒေါ်နွဲ.လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရှေ.နား) တွင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိခဲ့ဖူးသည်။ မြို.လေးတွင် ဟိုးးးးးးယခင်မှ ယခုထိ၇ှိနေသေးသောဆိုင်များ (ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွင်တော. ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို နှစ်၃၀၀ ခန်.ထိအမွေဆက်ခံဖွင်.လှစ်ဂုဏ်ယူထိမ်းသိမ်းကြသည်)...ယခင်ကနာမည်ရှိသော်လည်း ယခုဆိုင်မ၇ှိတော.သည်များ ၊ယခုနောက်ပိုင်းမှပေါ်လာသောဆိုင်များ အမျိုးမျိုးရှိကြသည် ။ကြက်တညင်မုန်.ဟင်းခါး ၊ ဈေးထောင်. BOC ဆိပ်နားရှိဒေါ်ဝက်မုန်.ဟင်းခါး ၊စာတိုက်ထောင်.မုန်.ဟင်းခါး၊ မင်္ဂလာဝင်းထောင်.နားရှိ ရွှေညာမုန်.ဟင်းခါး၊ဈေးတန်းထဲရှိ ဒေါ်ကျင်သန်း မုန်.ဟင်းခါး၊ ရေကျော်ကမ်းနားတောသင်္ဘောဆိပ်လေးတွေနားကဆိုင်များ၊ဆေးရုံရှေ.လမ်းရှိမုန်.ဟင်းခါးဆိုင် ၊ ဒေါ်ပုမဆလာစက်နားရှိ မုန်.ဟင်းခါး ၊ ယခုနောက်ပိုင်းလူကြီးများ ရောက်လျှင် စားလေ.ရှိသော တံတားအောက် ကမ်းနားဖက်ရှိ ဦးကျော်တင်. မုန်.ဟင်းခါး စသည်တို.အပြင် သူ.အရပ်နှင်.သူ အားပေးနေကြသော ဆိုင်များကလည်း များစွာရှိနေပါသည်။၀ါးခယ်မဈေးအတွင်းတွင် မုန်.ဟင်းခါးတန်းလည်း သီးသန်.ရှိနေပြီး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စားသုံးနိုင်သည်။
ရန်ကုန်ရှိ ပန်းခြံ တစ်ခုအတွင်းကဆိုင်တစ်ဆိုင်က မုန်.ဟင်းခါးတစ်ခါမှာ ၁၈၀၀ ကျနေချိန် (သူက Ready Made မှာမှချက်သည် ၃ယောက်စာခန်.တော.ရှိမည်)နာမည်ကြီး ဆိုင်တစ်ခုမှာ ငါးဖယ်ကြော်နှင်. ၇၀၀ ကျပြီး ဟင်းရည်သောက်လျှင် ဟင်းရည်ဘိုးပေးနေရချိန် မြို.လေးတွင် ရပ်ကွက်ဆိုင်များ၌ အကြော်တစ်ခုနှင်.မှ ၁၀၀ သာပေးရသောဆိုင်လေးများရှိနေသေးသည် ။ဈေးထိုက်သင်.သလောက်ရှိသည်ဆိုသော ဈေးကြီးထဲမှ ဆိုင်များတွင်မှ အကြော်စုံနှင်.မုန်. တစ်ပွဲစား ၊နောက်ထပ်အကြော်စုံနှင်. ဟင်းရည်တစ်ပွဲထပ်သောက် ထိုမှ ၇၀၀ သာကျသည် ၊ရွာလေးများသို. လှေဖြင်. လိုက်ရောင်သော မုန်.မှ တစ်ပွဲ ၁၅၀ ခန်.သာကျသည်။
မြို.လေးတွင် ၀ါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါး မည်မျှအရှိန်အ၀ါကြီးသနည်းဆိုလျှင် ရခိုင်မုန်.တီပင်လျှင် လွန်ခဲ့သော နှစ်အစိတ်ခန်.က မှစတင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး နာမည်ရှိဆိုင် တစ်မြို.လုံးမှ တစ်ဆိုင်ခန်.သာရှိပြီး ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုလျှင်လည်း ပြီးခဲ့သည်. နှစ်ပိုင်းလောက်မှသာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး တစ်ဆိုင်ခန်.သာ သေချာရောင်းချနေနိုင်ပါသည်။
အဲဒီတော. နောက်ဆုံးနိဂုံးချုပ်ရပါလျှင်ဝါးခယ်မမြို.လေး၏မုန်.ဟင်းခါး ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း တီးမိခေါက်မိတော. ရှိလောက်ပြီဟု ယူဆပါသည်။မြို.လေးဆီ တစ်ခါတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့လျှင်ဖြင်. ၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါးကို စားဖြစ်အောင်စားကြည်.ခဲ့စေချင်ပါသည်။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 11:22 AM
Labels: မမေ.နိုင်စရာ ဒေသထွက် အစားအစာ များနှင်.အမေ.ထမင်း စားပွဲ